Faayilii - Pirezdaantii Naannoo Somaalee
Paartiin badhaadhinaa kan mootummaa naannoo somaalee bulchuu fi addi bilisummaa Ogaden nageenya irratti waliin ta’anii hojjechuuf walii galuu isaanii beeksisan. Itti dabaluu dhaanis guyyaa kaleessaa siidaa Jijjigaa keessatti argamu diiguu dhaan uummati akka jeeqamu gochuuf yaaliin ta’e fashale jechuun bulchiinsi naannoo Sanaa beeksisee jira.
Hoogganni mootummaa naannoo Somaalee paartii mormituu naannoo adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniif afeerraa ciree gochuu dhaan nageenya naannoo fi uummata naannoo Sanaa dhimmootii tokkoomsan irratti waliin ta’anii hojjechuuf walii galuu isaanii itti aantuu itti gaafatamtuun waajjira dhimmootii kominikeeshinii naannoo Sanaa aadde Hiboo Ahimed VOAf ibsaniiru.
Dubbi himaan adda bilisummaa biyyoolessa Ogadeen obbo Hassan Abdulaahiim paartiin isaanii paartii badhaadhinaa naannoo Somaalee waliin nageenya naannoo ilaalchisee waliin hojjechuuf walii galuu isaa beeksisan. Uummati naannoo sanaaa tokkoomuun dursi kan kennameefii dha kan jedhan obbo Hasan kana dura paartiin isaanii mootummaa irraa komee qabuuf furmaata kan kennu koreen paartilee lamaan irraa walitti dhuf hundeeffamuus beeksisaniiru
Gama biraan magaalaa Jigjigaatti kan argamu siidaa Se’id Mehammed Abdulaahii Hasan diiguf yaaliin ta’ee akka ture aadde Hiboo Ahimed ibsanii gochi kun uummata somaalee dheekkamsiisee gara hookkaraatti akka seenu gochuuf ture garuu fashaleera jedhan.
Mootummaan Kan Na Hidhe Filannoo Keessatti Akka Ani Hin HIrmaanneefi: Obbo Baqqalaa Garbaa
Waa’ee Hidhaan Laga Abbayaa Marsaan Duraa Guutamuu Irratti Yaada Uummataa
Yaa’iin Idilee Caffee Oromiyaa Sababaa fi Furmaata Jeeqama Oromiyaa Keessaa Irratti Mari’ate
Hayyu-dureen ABO Walga’iin Waajira Gullalleetti Geggeessames Ehama Koo fi Qajeelfama Dhaabaatii Ala, Jedhu